Apple ayaa ku dhawaaqday Podcasts iyada oo loo marayo Adeegga Diiwaangelinta | Waxaan ka socdaa mac
Waa rasmi. Apple waxay bilawday dhacdadii gu'ga markay ahayd Abriil 20 iyada oo ka hadlaysa adeegyada shirkadda Mareykanka laga leeyahay. Waxa ugu horreeya ee ay shaacisay waa a Rukunka Podcast. Adeeggu wuxuu si toos ah u socon doonaa laga bilaabo bisha soo socota wuxuuna u oggolaanayaa dhagaystayaasha inay si toos ah u taageeraan Podcastcast-yada barnaamijka Podcasts.
Apple waxay kubilaabtay dhacdooyinkeedii gu'ga mar labaad qaab muuqaal ah iyadoo socodkeedana uu ku marayo agaasimaheeda Apple Park, kuna dhawaaqaya adeegyada shirkadda. Midkood waa adeegga Podcasts. Dhacdooyinka cusub ee bilaabmaya bisha soo socota, Bisha May.
Diiwaan gelinta Apple Podcasts waxaa heli doona dhageystayaasha In ka badan wadamada 170 iyo gobolada bishii May. Shuruudaha software ee gaarka ah ee loogu talagalay rukummada Apple Podcasts iyo kanaallada dhawaan ayaa la wadaagi doonaa.
Qiimaha rukun kasta dhigay by abuureyaasha waxaana laguugu soo dallacayaa bil kasta asal ahaan. Intaa waxaa sii dheer, hal abuureyaashu waxay bixin karaan biil-bixin sanadle ah, taas oo macaamiisha ay ka maamuli karaan dejimaha akoontiga Apple ID, oo hadda laga heli karo Dhegeyso Hada. Dhageystayaashu sidoo kale waxay awood u yeelan doonaan inay helaan tijaabooyin bilaash ah iyo qaybo muunad ah oo ay abuureen.
Iyada oo wadaagista qoyska, ilaa lix xubnood oo qoyska ka mid ah ayaa wadaagi kara rukunka. Intaa waxaa sii dheer, dhagaystayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay ku helaan tabka raadinta la hagaajiyay oo leh jaantusyada ugu sarreeya iyo qaybaha, taxanaha cusub iyo bogagga dhacdooyinka leh badhanka Smart Play, iyo dhacdooyinka keydsan ee iOS 14.5, iPadOS 14.5, iyo macOS 11.3. Qeybaha la keydiyay ayaa sidoo kale laga heli karaa watchOS 7.4 iyo tvOS 14.5. Cusboonaysiinta barnaamijyadan waxaa la heli doonaa usbuuca soo socda.
Barnaamijka Apple Podcasters, oo ay ku jiraan dhammaan aaladaha aad ugu baahan tahay inaad ku siiso rukhsad qaali ah Apple Podcasts, waxaa heli kara hal-abuureyaasha in ka badan 170 waddan iyo gobollada ku baahsan 19.99 Dollar (USA) sanadkii. Abuurayaashu way iska diiwaan gelin karaan barnaamijka Apple Podcasters maanta iyada oo loo marayo ka soco Apple Podcasts Connect.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay ku dhawaaqeysaa Podcasts iyada oo loo marayo Adeegga Diiwaangelinta
Soo bandhigida iPad-ka ayaa bilaabmaya